नमोबुद्ध ५ कानपुरमा सोनाम ल्होछार बृहत २ दिने साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने – Radio Roshi
नमोबुद्ध ५ कानपुरमा सोनाम ल्होछार बृहत २ दिने साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने
in मनोरञ्जन / रोशी खबर — by Roshikhabar —	January 20, 2020
नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ५ कानपुरमा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । २८५६ औँ सोनाम ल्होछार को अवसरमा माघ १७ र १८ गते बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको हो ।
ल्होछार कार्यक्रम मूल समारोह समितिका अनुसार कार्यक्रमको उद्घाटन प्रतिनिधी सभा सदस्य सांसद गंगाबहादुर दोङ (बमध्वोज)ले गर्ने छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश सभा सांसद रत्न ढकाल, नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर टि.पि.शर्मा तिमल्सिना, नगर सभापति कुन्साङ लामा लगायत बिशिष्ठ व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहनेछ । साथै कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त दर्जन बढि कलाकारहरु साथै स्थानिय कलाकारहरुको समेत बेजोड प्रस्तुती रहनेछ ।
ल्होछार कार्यक्रम मूल समारोह समितिको आयोजनामा माघ १७ र १८ दुई दिन हुने कार्यक्रममा नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ५ को सहयोग रहने छ ।